७ साउनसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिने सरकारको निर्णय, सार्वजनिक यातायात र हवाई सेवा अझै बन्द – Hamrosandesh.com
७ साउनसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिने सरकारको निर्णय, सार्वजनिक यातायात र हवाई सेवा अझै बन्द
सरकारले थप तीन हप्ता लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन ७ साउनसम्मका लागि थप्ने निर्णय गरेको हो ।
लकडाउन अहिलेकै अवस्थामा खुकुलो रहने ७ साउनसम्म थपिएको उद्दोग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिए । हवाई सेवा पनि ७ साउनसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
लकडाउनमा विगतमा जस्तै शैक्षिक संस्था, मनोरञ्जन स्थल, सार्वजनिक यातायात चल्ने छैनन् ।
कोरोनाबाट थप १ जनाको मृ’त्यु, नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या २९ पुग्यो
ललितपुरको स्टार अस्पतालमा मृत्यु भएका १ जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
अस्पतालका कोरोना व्यवस्थापन समितिका संयोजक डाक्टर अनिल पोखरेलले अस्पतालमा मृत्यु भएका १ जना ३० वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन् ।
डा. पोखरेलका अनुसार मृत्यु भएका कोरोना संक्रमित रौतहटका बासिन्दा हुन् । उनलाई शनिबार बेलुका ४ बजे श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको भन्दै स्टार अस्पतालमा ल्याइएको थियो ।
अस्पतालले उनमा कोरोनाको आशंका गर्दै कोरोना संक्रमतिलाई छुट्याइएको आइसियुमा भर्ना गरेको थियो । उनको शनिबार राति नै स्वाब संकलन गरी पाटन अस्पताल पठाइएको र सोही दिन राति नै बिरामीको मृत्यु भएको डा. पोखरेलले बताए ।
उनको आइतबार राति ११ बजे रिपोर्ट पोजेटिभ आएको डा. पोखरेलले बताए । ‘शनिबार बेलुका श्वासप्रश्वासको समस्या लिएर बिरामी आउनुभयो, हामीले कोरोनाको आशंकामा कोरोना कै लागि भनेर छुट्याइएको आइसियुमा भर्ना गरेर त्यही दिन राती स्वाब संकलन गरी पाटन अस्पतालमा पठायौं, उहाँको उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भयो,’ डा. पोखरेलले खबरहबसँग भने, ‘उहाँको रिपोर्ट आइतबार राती ११ बजे पोजेटिभ आयो ।’
डा. पोखरेलका अनुसार शनिबार नै मृत्यु भएपनि कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नआइसकेकाले उनको शव अस्पतालमै थियो । आज रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको शव व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको डा. पोखरेलको भनाइ छ ।
अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि अहिले उनको उपचारमा खटिएका १४ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखेर कोरोना परीक्षणको तयारी भइरहेको डा. पोखरेलले बताए ।
मृत्यु भएपछि कोरोना पुष्टि भएका ती संक्रमितलाई पहिला नै कोरोना विशेष आइसियुमा राखिएकाले अस्पतालको अन्य सेवामा समस्या नभएको डा. पोखरेलले बताए ।
योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २९ पुगेको छ । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्टार अस्पतालमा निधन भएका व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि भएको आधिकारिक घोषणा गरेको छैन ।
बाल भो भाग- २ हेरेर​ लाईक​, कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला र कमेन्टमार्फत प्रतिक्रिया दिनु होला